Semalt: 4 Ny fitaovana famafazana data izay hamonjy ny fotoanao
Programming is a must part of science. Mila mampitombo fahaiza-manao fahaiza-manao ny fahaiza-manavaka mba handikana ny antontan-taratasim-baovao. Na izany aza, ny olona sasany dia tsy afaka mianatra fiteny coding hafa ary mitady fomba hafa mety. Ny fitaovana maoderina manaraka dia tsara ho an'ny tsy mpandrindra.
Efa hatramin'ny ela ny Kimono Labs. Izy io no iray amin'ireo fampiharana matevina sy mahavariana indrindra. Ity programa open-source ity dia misy famoahana andrana maimaim-poana 15 andro, saingy azo atao ihany koa ny dikan-teny maimaim-poana. Kimono Labs dia manala ny tranonkala iray manontolo, manomboka amin'ny fanangonana tahirin-kevitra mba hanamafisana sy hanamafisana azy. Ny Kimono Labs dia miasa ho toy ny mpilalao haingam-pandeha matanjaka ary azo ampiasaina raha tsy misy fehezan-dalàna. Ankoatr'izany, dia mamela anao hikapoka toerana marobe amin'ny fotoana iray ihany koa izany ary tsy mampandefitra ny kalitao rehetra. Kimono Labs no safidy voalohany amin'ny orinasa, ampiasaina amin'ny fanangonana tahirin-kevitra, fanaraha-maso ary fandaminana. Mampihatra fanaovan-tserasera lehibe ho an'ny mpampiasa azy io koa izy io, ary mora kokoa ny asany.
Tsy mora ny mialoha ny fametahana ny data ho an'ireo tsy mpandrindra. Izy io dia sehatra fitahirizana tranonkala maoderina natsangan'ny manam-pahaizana ary milaza fa nanoratra pejy maromaro tamin'ny Internet. Import. io dia lehibe tsy ho an'ny mpandahateny fotsiny fa koa ho an'ny mpahay siansa. Ity fitaovana ity dia mamela ny fampahalalana tsara indrindra ho anao alohan'ny hanombohana azy io ary ampiasain'ny manam-pahaizana momba ny harena ankibon'ny tany koa. Ny parameter hyper dia mahatonga anao ho mora ny misafidy ny angon-drakitra tsy misy fetrany ary ahodinkodina ao amin'ny endrika tianao.
3. API Facebook sy Twitter
Ho an'ny manampahaizana amin'ny media sosialy, fanombohana sy tsy mpandrindra, ny API Facebook sy Twitter dia tena mahomby. Izy ireo dia manome tolotra fanodinana data amin'ny alalàn'ny API manokana ary maka minitra vitsivitsy fotsiny mba hahazoana ny angon-drakitrao amin'ny endrika nofinidy. Mampiasa loharanom-baovao voafaritra izy mba hamoronana daty sy handrindrana ny tranonkalanao ao anatin'ny fotoana fohy, tsy misy ny fahaiza-manao sy ny fahaizana teknika. Ny API dia mamaha olana samihafa mifandraika amin'ny angona, mamantatra sy manitsy ny fahadisoana ao anaty lahatsoratra, ary mahazo fampahalalana mendrika avy amin'ny sary sy horonan-tsary ho an'ny mpampiasa.
Raha mampiasa Google Chrome matetika ianao ary izy no browser-nao voalohany, dia manandrana fotsiny ny Scraper. Izy io no iray amin'ireo fandaharam-pianarana faran'izay tsara sy mahomby indrindra. Izy io dia miorina amin'ny teknolojia fianarana milina ary natao manokana ho an'ny tsy mpandrindra. Ny tabilao dia afaka mamoaka fampahalalana mahasoa ho anao ary manana toetra miavaka. Ny safidy hita (spam ) dia mamela anao manaisotra data amin'ny spam ary mandrindra ny fampahalalana mifototra amin'ny zavatra takinao, tsy misy famaritana diso na fitsipika diso. Ny scraper koa dia manampy amin'ny fanadihadiana ny fanehoan-kevitra amin'ny mailaka sy ny mailaka, ny fampiroboroboana ny angon-drakitra tsara, ary mamaritra raha mety ho an'ny orinasanao izany na tsia.
Mifanohitra amin'ny fitaovana maoderina mahazatra hafa, ny tolotra 4 etsy ambony dia tsy mitaky anao ho teolojika. Ary koa, tsy mila mianatra ny fiteny fandaharana ianao mba hahazoana tombontsoa avy amin'ireo mpanodina data . Tsy maintsy mametraka sy mamela azy ireo fotsiny ianao mba hahazoana tombontsoa amin'ny safidy sy ny endriky ny endritsoritra Source .